NS Media | पार्टीभित्र मात्र होइन बाहिर पनि छैन ओलीको विकल्प
पार्टीभित्र मात्र होइन बाहिर पनि छैन ओलीको विकल्प
जुलाई महिनामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धेरै सर्च हुने नेतामा पर्नु भएको छ । जुलाई महिनामा गुगलमा सर्च भएको अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरुमा सबैभन्दा बढी नेपालका प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली पर्नु भएको हो । विश्वलाई नै सानो टोलमा परिणत गर्ने गुगलको तथ्याङ्कमा जुलाई महिनामा विश्वका ठूला नेताहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै सर्च गरिने नेतामा केपी शर्मा ओलीको नाम किन आयो ? कौतुहलको विषय बनेको छ । छ दशकदेखि भारतले आफ्नो नियन्त्रण र मानचित्रमा समेत राखेको नेपालीे भूभागलाई नेपालकै मानचित्रमा ल्याउने काम सबै राजनीतिक दलहरुलाई साथमा लिएर केपी शमा ओली नेतृत्वको सरकारले गर्यो । प्रधानमन्त्री केपी शमा ओलीले हिन्दू संस्कृतिले मान्ने मर्यादा पुरुष राम नेपालका ज्वाइ होइनन् छोरा हुन्, अयोध्या नेपालको ठोरीमा पर्छ भन्नु भएकाले उहाँ गुगलको धेरै सर्च हुने विश्वकै नेतामा पर्नुभएको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली बोली र काम दुबैले सर्च लिष्टमा पर्नु भएको हो ।
ओलीको यी अभिव्यक्तिले अर्को पनि राम्रो काम भएको छ त्यो हो नेपाल भारतकै एउटा राज्य भएको धेरै भारतीयहरुले बुझ्ने गरेका रहेछन् । नेपालको नक्शा र अयोध्याको कुराले गर्दा धेरै भारतीयहरुले थाहा पाए नेपाल छुट्टै देश रहेछ भनेर । उहाँले उठाएको एजेण्डाले नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र हो भनेर नबुझेकाहरुले पनि बुझ्ने मौका पाए । प्रधानमन्त्रीको यो भनाईलाई जनताको पंक्तिबाट राम्रो साथ र समर्थन प्राप्त भएको छ । तर, उहाँकै पार्टीभित्रका केही नेताहरुले यो कुटनीतिक शैली भएन, यो शव्द फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए जसले नेपालको होइन बरु भारतीयहरुको तावेदारी गरेको भान नेपाली जनतालाई परेको छ । तर, परराष्ट्रिय मामिलामा दखल राख्ने टीकाराज ढकाललगायतका केही विज्ञहरुले भने यो कुटनीतिक घेराको राम्रो शैली भएको व्याख्या गर्नु भएको छ । यसले भारतलाई अब नेपालले नयाँ एजेण्डा उठाएर समाधान गर्न सक्ने हैसियत राख्छ र नेपाललाई हिजोको शैलीमा व्यवहार नगर भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
अहिलेको काम भनेको पार्टी सक्रिय भएर तीनै तहका सरकारले गरेको कामको अपनत्व ग्रहरण गर्दै २० वर्षमा हुन नसकेको विकास निर्माण र आर्थिक उन्नतिको काम २ वर्षमा भएको कुरा जनतामा पुर्याऔं र हुन नसकेको कामलाई यसरी गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई मार्ग प्रसस्त गरौं, अहिले विग्रह गर्दा वा गरेको सन्देश मात्रै गयोभने आगामी निर्वाचनमा नेकपालाई निक्कै कठिन अवस्था आउन सक्छ त्यसले ओलीलाई भन्दा भोलिलाई नोक्सान पु¥याउने छ । अहिले सरकारलाई अझ बलियो बनाएर एकमना एकताका साथ महाधिवेशन र आवधिक निर्वाचनमा जानु नै उत्तम विकल्प हो ।
भारतले छ दशकदेखि नेपालको भूभागमा सेना राखेर दलमर्दन गर्दै आएको तर, पनि कुनै नेताहरुले चुँसम्म नबोलेकोले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतकै हो भन्ने आम मानसिकता बनाउन भारत लागिरहेको योजनालाई ब्रेक लगायो । त्यही मानसिकताबाट भारत नेपालसँग व्यवहार गर्दैछ । अहिलेसम्म नेपालका नेताहरुले केही गरेनन् त भन्नुहुँदैन उनीहरुले कुटनीतिक नोट पठाएर भारतलाई यो हाम्रो देश हो भन्ने झिनो भए पनि सन्देश दिएकै हुन् । यतिका वर्षसम्मको यो प्रयासलाई भारतले सुनेन् । भारतलाई सुनाउने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्नु पर्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाईले सबै नेपालीको मन मस्तिष्कमा उर्जा भरेको छ । केही तत्वहरुको भने हिनताबोध र दमित मानसिकताको कारण ओलीले यसो नभनेको र नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला । तर, म र मजस्ता धेरै नेपालीले गर्व गर्छन् प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो भावनाको कुरा गर्नुभयो भनेर । अहिले प्रधानमन्त्रीले उठाएको एजेण्डालाई कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीले होच्याउने, गिराउने वा तेजोवध गर्ने गरी प्रस्तुत गर्नु हुँदैन बरु त्यो विषयमा नबोल्दा पनि हुन्छ । र, केपी शर्मा ओलीले निक्कै साहसिक काम गरे भनेर भन्नुको पनि अर्थ छैन बरु प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार प्रमुखको हैसियतले जे काम गर्नु पथ्र्यो गर्नुभयो भनेर भन्नुस् । यसले नेपाली जनतामा दर्भिलो विश्वासनीयता बढाउँछ । उहाँले उठाउनु भएको एजेण्डाको भावनालाई आत्मसाथ गर्नुहोस् त्यसले नेपालकै हित गर्छ ।
वास्तविक नक्सा मात्र बनाएर मात्रै नहुने चर्चा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले काभ्रेमा मदन भण्डारी फाउण्डेशनको कार्यक्रममा भन्नुभएछ ‘जमिन फर्काउन भन्नजस्तो सजिलो छैन् ।’ उहाँले कुनै एजेण्डा नभेटेर यस्तो धारणा राख्नु भएको हो ? कि भारतसँग बोल्ने हिम्मत नभएर यस्तो धारणा राख्नु भएको हो ? भारत ठूलो देश हो, उसँग धेरै सेना छ, हामीभन्दा सम्पन्न देश हो, उसको पहुँच हामीभन्दा माथि छ आदि आदि लाग्छ भने नक्शाको बारेमा नबोल्दा राम्रो हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजस्तो बलशाली नेताको मन्त्री मण्डलमा बस्ने यो मामिलामा निकट सहयोगी परराष्ट्र मन्त्रीको दायित्व पाएका व्यक्तिले ‘जमिन फर्काउन भन्नजस्तो सजिलो छैन’ भन्न सुहाउँछ ? मनमा लागेको भए मनमै राख्नुहोस् । तर, नेपाली जनतामा भरिएको उत्साहलाई नदपेट्नुहोस् । यस्ता कुराले नेपाली हुनुमा पीडाबोध हुन्छ माननीय मन्त्री ज्ञवाली ज्यू । तपाईसँग प्रमाणहरु छन् । भन्नुहोस्, हामी भारतीय पक्षलाई वार्तामा बोलाउँछौं । फोन गर्छौ, मेल पठाउँछौं, पत्राचार गर्छौ । हामीलाई टेरेन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि पछि पर्दैनौं । त्यति गर्दा पनि भएनभने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छौं । तर, योभन्दा पहिला नेपालका सबै पक्षको राय सल्लाह लिन्छौं भन्नुस् । भन्नुस् मात्रै होइन पूर्व सबै परराष्ट्रिय मन्त्रीहरुसँग बसेर कुरा गर्नुस्, पूर्व परराष्ट्र सचिवहरुको भेला बोलाउनुस्, विज्ञ समूहसँग बसेर छलफल गर्नुहोस् । नेपाली जनतालाई एउटा साइट खोलेर सुझाव माग्नु होस् । सबै पक्ष र क्षेत्रका मानिसले नेपालको भूमि फर्काउन मेरो पनि योगदान छ भनेर गौरव गर्ने वातावरण बनाउनुस् । भारतले नेपालको जमिन फिर्ता नगरी सुख्खै छैन् ।
तपाईले गरेको प्रयत्नले भारतका प्रत्येक बजारमा धक्का हान्ने छ । अयोध्याको कुरा आएको छ । हिन्दू संस्कृति मान्नेहरुसँग आग्रह गर्नुस् । नेपालका छोरा रामको दरवार हेर्न ठोरी जाउँ भन्नुस् । नेपालका धार्मिक पर्यटकहरुलाई आग्रह गर्नुस् । आन्तरिक पर्यटनको विकास गरौं । धार्मिक पर्यटनमा विदेश जानेहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनिवार्य पास लिनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुस् । अहिलेको कठिन अवस्थाको बन्द सीमालाई निरन्तरता दिनुस् । लौ हेरौं त ! भारतले कसरी नेपाली भूभाग फिर्ता गर्दैन । तर,तपाई भारतीय पक्षले यसो ग¥यो भने, उसो ग¥यो भने अडकल लगाउनुभयो भने त्यसै गर्छ । सूरो मर्छ एक बार डरपोप मर्छ बारबार । त्यसकारण लाछी कुरा नेपाली जनतालाई नसुनाउँदा राम्रो हुन्छ । यो मामिलामा धेरै परराष्ट्र विज्ञहरुले मैले पनि सरकारलाई सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच राख्नु भएको छ । उहाँहरुको सुझाव संकलन गर्नुहोस् र उहाँहरुलाई पनि साथ लिएर छलफल चलाऔं । यसलाई नेपाल र भारतको जनताको पंक्तिबाट, संघसंस्थाहरुको तर्फबाट छलफल चलाऔं । देशमा रहेको विषय विज्ञहरुसँग छलफल चलाऔं जस्तो कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका विभिन्न प्राक्टिसहरुका बारेमा छलफल चलाऔं । त्यो क्षेत्रका प्राविधिक इन्जिनियरहरु, नापी विभागका पूर्व महानिर्देशकहरुसँगको छलफललाई व्यापक बनाऔं । नापी विभागका पूर्व महानिर्देशकहरुसँग केही महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु सुरक्षाको दृष्टिले आफ्नै नियन्त्रणमा राखेको हुनसक्छ त्यसलाई संकलन गरौं । अनि भारतसँग छलफलमा बसौं । यति गर्दा तपाईको इमान्दार प्रश्तुती देखिन्छ । लौ त ! कसरी यो अभियान सफल हुँदैन ?
राष्ट्रपति कार्यालयमा किनेको गाडी विद्यादेवी भण्डारीको निजी हो कि सम्माननीय राष्ट्रपतिको ? राष्ट्रपति कार्यालय सरकारी हैन ? जुन कुराको चर्चा गर्न पनि लायक छैन त्यस्ता बकबास कुरा उठाएर राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउने काम कुन देशी वा विदेशी शक्तिको आडमा किन गरिदैछ ? कसैलाई नियुक्ति गर्ने वा जागिर खुवाउने काम राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कहाँ छ र कसरी भयो ? यस्ता अनावश्यक कुरा उठाएर राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने काम कसैबाट हुनुहुँदैन । त्यसले देशको लागि हित गर्दैन बरु अहित नै गर्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अत्यन्तै कुटनैतिक ढंगले नेपाली समस्या समाधान गर्न भारतलाई दवाव दिइरहनु भएको छ । कालापानी पछि अयोध्याको कुरा आएको छ । भारतले दिएको टक्समा मात्र नेपाल अल्मलिनु हुँदैन बरु भारतलाई पनि टाक्स दिनु पर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले राम्ररी बुझ्नु भएको छ । उहाँले दिएको टाक्स भारतले पनि बुझ्यो । भारत सरकारलाई नेपालको मामिलाले निक्कै दवाद दिएको छ । किनभने, यो मामिलाको सूचना नेपाल वा भारतबाट मात्र होइन अन्यदेशहरुबाट पनि लिइरहेको छ भारतले । विश्वका विभिन्न देशमा जाने नेपालीहरुले भारतीय नागरिकसँग व्यक्तिगत हैसियतमा पनि भन्न थालेका छन् यो मामिलामा भारतले नेपालको चित्त दुखाएको छ, अब नेपालले छोड्ने छैन भन्न थालेका छन् । राजनीतिक विषयमा ओलीको विरोध गर्नेहरुले भूमिको विषयमा ओली सरकारले ठीक गरेको सन्देश विदेशबाट नेपाल र भारतमा पनि भित्रिएको छ । यो नोटिस भारतले राखेको छ । त्यसकारण, भारतले पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई टाक्स दिएको छ । त्यो हो, पार्टीभित्रैबाट राजीनामा माग गर्ने । बाहिरबाट सम्भव नै थिएन, त्यसकारण भित्रबाट राजीनामा माग गर्न शुरु गरेको हो । यसो भयोभने अस्थिर प्रधानमन्त्रीसँग अहिले वार्ता नगरौंभनी भारतीय अन्य राजनीतिक र कुटनीतिक मामिलामा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा अस्थिरता बढेकोले अहिले वार्ता गर्न सकिन्न । यही भावभूमिबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएको कुरा बाहिर आएको छ ? नत्र किन अहिले नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो ? राजीनामा माग्ने गरीको प्रधानमन्त्री ओलीले के गल्ती गर्नुभयो ? त्यो बाहिर आउनु प¥यो । कसलाई मन्त्रीको जागिर खुवाउन, कसलाई प्रधानमन्त्रीको जागिर खुवाउन, कसलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन, कसलाई राष्ट्रपति बनाउन उहाँले राजीनामा दिनु पर्ने ? नेपाली जनताको यो प्रश्नको उत्तर आउनै पर्छ । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तारोहणको मामिला अब नेकपाभित्र मात्र सीमित छैन । अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि भन्न थालेका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले जीवराम भण्डारीसँगको वार्तामा प्रष्टै भन्नुभएको नेपालको राजनीतिक परिदृष्यमा अहिले केपी शर्मा ओलीको विकल्प त्यो पार्टीभित्र मात्र होइन बाहिर पनि छैन भनेर ।
दशकदेखि भारतले आफ्नो नियन्त्रण र मानचित्रमा समेत राखेको नेपालीे भूभागलाई नेपालकै मानचित्रमा ल्याउने काम सबै राजनीतिक दलहरुलाई साथमा लिएर केपी शमा ओली नेतृत्वको सरकारले ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी शमा ओलीले हिन्दू संस्कृतिले मान्ने मर्यादा पुरुष राम नेपालका ज्वाइ होइनन् छोरा हुन्, अयोध्या नेपालको ठोरीमा पर्छ भन्नु भएकाले उहाँ गुगलको धेरै सर्च हुने विश्वकै नेतामा पर्नुभएको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली बोली र काम दुबैले सर्च लिष्टमा पर्नु भएको हो ।
अहिले राष्ट्रपतिले राजनीति गर्नुभयो भनेर व्यापक डंका पिट्न थालिएको छ । उहाँले प्रशासनिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नुभयो भनेर, विलासिताका सामग्री खरिद गर्नुभयो भनेर के के हो के के । राष्ट्रपति आफैले गर्ने कामको पनि हेक्का नराखी यस्ता आरोपहरु किन लाग्छ ? उहाँले राजीनामा दिएर कसैलाई जागिर खुवाउनु प¥यो ? नेकपाका दुई अध्यक्ष र बरिष्ठ नेताको सहकार्यमा दुई अध्यादेश आएको कुरा त छलङ्गै छ । उहाँहरुको सचिवालयको बैठकमा सबैको प्रस्तुती हेर्दा थाहा हुँदैन र ? तीनजना बीच भएको सहमतिको त्यो अध्यादेशको कुरा भारतीय दूतावास र मधेशकेन्द्रित दलहरुमा चुहाइएको कारण तीन मध्ये दुई चुप बस्नु भएको कुरा त बाहिर सबैलाई थाहै छ । अनि, किन अध्यादेशको उकुर्जी ? प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गएको सिफारिसलाई राष्ट्रपति अनुमोदन गर्नुपर्ने नेपालको संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार हैन र ? राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने सबै खर्च प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने हैन र ? अनि कसरी राष्ट्रपति विलासी हुनुभयो । राष्ट्रपति कार्यालयमा किनेको गाडी विद्यादेवी भण्डारीको निजी हो कि सम्माननीय राष्ट्रपतिको ? राष्ट्रपति कार्यालय सरकारी हैन ? जुन कुराको चर्चा गर्न पनि लायक छैन त्यस्ता बकबास कुरा उठाएर राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउने काम कुन देशी वा विदेशी शक्तिको आडमा किन गरिदैछ ? कसैलाई नियुक्ति गर्ने वा जागिर खुवाउने काम राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कहाँ छ र कसरी भयो ? यस्ता अनावश्यक कुरा उठाएर राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने काम कसैबाट हुनुहुँदैन । त्यसले देशको लागि हित गर्दैन बरु अहित नै गर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता गराएको, पार्टी फुटाउन लागेको जस्ता आरोपहरु लगाउन थालिएको छ । यो जनयुद्धको शैली नअप्नाउँदा राम्रो हुन्छ । सेनाको व्यारेकमा लडाकालाई घेरा हाल्न लगाएर ए.. ल्या…ल्या कर्णेलको टाउको भनेर बाहिरबाट ठूलो स्वरले कराए जस्तो शैली कार्यकर्ताले त बुझिसके भने केपी शर्मा ओलीले नबुझ्ने कुरै भएन । ७÷८ वर्षको उमेरदेखि घरबाट बाहिरिएर अर्काको घरमा बसेर पढेर जनताको मुक्तिको अभियानमा हिडेर पार्टीभित्र पनि निरन्तर संघर्ष गर्दै पार्टीलाई एक तिहाईबाट दुई तिहाईको उचाईमा पु¥याउने केपी शर्मा ओली पार्टी टुक्राउने खेलमा रहेको भनेर विदेशी शक्ति सामु कमजोर सावित गर्न खोजेको भनेर कसले बुझेको छैन र ! नेकपाको स्थायी कमिटीले दुबै पदबाट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजीनामा किन के कारणले मागिएको हो ? कुरा प्रष्ट छ अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री हुने इच्छा, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्ने रहर, अर्का बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षा र बामदेव गौतमलाई तत्कालमा उपप्रधानमन्त्री बन्ने लहड चलेको हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु पर्ने उकुर्जी उठेको हो । जनताले यो कुरा पनि राम्ररी बुझेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तारोहणको मामिला अब नेकपाभित्र मात्र सीमित छैन । अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि भन्न थालेका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले जीवराम भण्डारीसँगको वार्तामा प्रष्टै भन्नुभएको नेपालको राजनीतिक परिदृष्यमा अहिले केपी शर्मा ओलीको विकल्प त्यो पार्टीभित्र मात्र होइन बाहिर पनि छैन भनेर ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सबै कार्यकर्तालाई राम्ररी थाहा छ । लगातार ३० वर्षसम्म पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा रहनु भएका र दुईपटक प्रधानमन्त्री हुनु भएका पुष्पकमल दाहाल किन एकताको महाधिवेशन र आवधिक निर्वाचनसम्म पर्खिन सक्नु भएन ? किनभने उहाँलाई कार्यकर्ता र जनताको विश्वास नै छैन् । नत्र उहाँले नेतृत्व गरेको पुराना पार्टीहरुको इतिहास खोजौं उहाँले कहिले कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुभयो ? उहाँले एक पटक पनि कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनु पर्दैन ? पन्द्र वर्षसम्म पार्टीको शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्री भएर पार्टीलाई ३३ प्रतिशतमा पु¥याउनु भएका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुन किन तयार हुनुहुन्न ? किन अहिले नै विधान विपरित काम गर्न अध्यक्ष ओलीलाई दवाव दिइरहनु भएको छ ? पार्टी नेतृत्वमा रहेकै बेला बीचैमा जिम्मेवारी छोड्नु भएका नेता झलनाथ खनालको बारेमा अहिले केही टिप्पणी नगरौं तपाईले पनि धैर्य गर्दा राम्रो हुन्छ । पार्टी र मोर्चामा पटक पटक सत्ता नै नभई नहुने नेता बामदेव गौतमको बारेमा धेरै चर्चा नगरौं कार्यकर्तालाई सबै कुरा थाहै छ ।
अहिले तपाईहरुले जनताको विकासको अधिकार संरक्षण गर्दै यो सरकारलाई सघाएर अर्को पटक जनताको घरमा गएर भोट नै माग्नु नपर्ने गरी काम गर्दा हुदैन र ? वर्तमान यो परिवेशमा नेपाली नेतृत्व बलियो बन्नु पर्ने अवस्थामा संसय खडा गरेर किन तमासा गर्दै हुनुहुन्छ ? अहिलेको काम भनेको पार्टी सक्रिय भएर तीनै तहका सरकारले गरेको कामको अपनत्व ग्रहरण गर्दै २० वर्षमा हुन नसकेको विकास निर्माण र आर्थिक उन्नतिको काम २ वर्षमा भएको कुरा जनतामा पुर्याऔं र हुन नसकेको कामलाई यसरी गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई मार्ग प्रसस्त गरौं, अहिले विग्रह गर्दा वा गरेको सन्देश मात्रै गयोभने आगामी निर्वाचनमा नेकपालाई निक्कै कठिन अवस्था आउन सक्छ त्यसले ओलीलाई भन्दा भोलिलाई नोक्सान पु¥याउने छ । अहिले सरकारलाई अझ बलियो बनाएर एकमना एकताका साथ महाधिवेशन र आवधिक निर्वाचनमा जानु नै उत्तम विकल्प हो ।